Hoji uumaa Gaanaa keessatti kalaqa egereef abdii ta'aa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Hoji uumaa Gaanaa keessatti kalaqa egereef abdii ta'aa jiru
12 Fuulbana 2018
Lafa ijoolleen saayintistii ta'uu itti baratan
"Gooftaa koo, Gooftaa koo, Gooftaa koo" jechuun ijoolleen soddoma caalan gammachuun iyyaa teessoo mukaa daree isaanii irraa utaalanii bahan. Dareen isaanis qarqara sulula margaan faayamee irra jira.
Dorgommichi Mana Barumsaa Giddugaleessa Sadarkaa Lammaffaa Bereekuusoo qarqara magaalaa guddoo biyya Gaanaa,Akraatti argamu keessatti. Innis eenyu dursee shiboowwanii fi tiraanziistaroota walqunnamsiisuun meeshaa sagalee guddaa dhageessisu tolchuu akka danda'u ilaaluufi.
Sakandoota muraasa booda ,kutichi sagalee baay'ee iyyuu fi guddaa ta'e hedduun guutame. Ijoolleenis gammachuun of wallaalan. Eenyu akka mooyate addaan baasanii himuun hin danda'amu ture.
Wal'aansoo jireenya daandiirraafi kalaqa kophee ribuu
Waggaa tokko dura,ijoolleen kunneen waa'ee elektirooniksii gabatee gurraacha, boronqii fi kitaaba fayyadamuun barachaa turan. Amma garuu sarkiiwutii mataa isaanii tolchuudhaaf wantoota barbaachisan hundumaa of biraa ni qabu.
Kalaqa Kitaaba Barataa
Hojii malkaayaa kana hunda duubaan kan jiru dargaggoo waggaa diigdamii-shanii Chaarlas Ofoorii Antiimpeemiiti.
Olkaayanni Meeshaa saayinsii hanga sanduuqa gurraattii xinnoo geessu tan gatiin ishiis kitaaba barataatiin walgituu (doolaara kudha-shan) ta'e, tan keessi ishii meeshaa elektirikaatiin guutamte kalaqeera.
"Meeshaalee adda addaa deeskii barattootaa irra keessee yeroo isaan sarkiiwutii elektirikaa jalqabaa hojjetan ilaanuun nama hawata.Sanatu akka nuti gara fuula duraa deemnu nu taasise. " jedhe.
Chaarlas kaampaanii Deekist Teeknoolojii (Dext Technology) jedhamu ji'oota kudha-saddeet dura hundeesseera. Amma kaampaaniin isaa miseensota sagal qaba. Hanga ammaa olkaayata meeshaalee saayinsii kuma shan caalan manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa biyya Gaanaa keessa jiranitti gurgureera.
Yaadicha kan jalqabe hiriyyaa isaa kutaa tokko waliin baratan Maaykil Asaantee Afriifaa kutaa ciisichaa yookiin doormii yuunivarsiitii keessatti ture. Tokkoon tokkoo daa'imman Gaanaa waggoota lamaan dhufan keessatti olkaayata meeshaa saayinsii tokko akka argatan fedhu.
"Kitaaba irraa beekumsa argachuun waan tokko ta'ee,yaaliidhaan muuxannoo gonfachuun garuu waan baayyee barbaachisaadha." jedhe.
Goodayyaa suuraa Chaarlas Ofoorii Antipeem kiitii saayinsii kana daa'imman guutuu Afrikaa biraan gahuuf abjuu qaba
Barri 2020moonni gosoota hojii beekumsa saayinsii,teeknoolojii,injinariingii fi Herregaa barbaadan akka ta'u abdatama. Hojiiwwan addunyaa meeqa ogummoota kanneen akka barbaadan namni beeku tokkollee haa jiraachuu baatu maalee,hojiiwwan dhibbeentaa saddeetama(80%) ta'an akka kallattii haaraa beekumsa saayinsii,teeknoolojii,injinariingii fi Herregaa barbaaduu akka danda'an tilmaamameera.
Garuu biyyoonni Afrikaa Sahaaraa gadii invastimantii barnootaa fi leenjii saayinsii,teeknoolojii,injinariingii fi Herregaa (STEM) irratti baay'ee duubatti hafaniiru. Galma Misooma Itti fufiinsa qabuu (sustainable development goal (SDG)) bishaan dhugaatii qulqulluu fi qulqullina naannoo waliin gayuuf qofa, biyyoota kanneen injinaroonni miiliyoona lamaa fi kuma dhibba-shan (miiliyoona 2.5) akka isaan barbaachisan Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii ibseera.
Doktar Toomaas Taagoowee miseensa Waldaa Saayinsii biyya Gaanaati. Daa'imman keessatti jaalala saayinsii uumuun daran barbaachisaadha, sababnisaa immoo biyyattiin injinarootaa fi ogeessota ciccimoo Teeknoolojii Qunnamtii(IT) gahaa hin qabdu waan ta'eefi jedhan.
"Barri isaa bara dijitaalaati.Kanaaf namoota carraa kanaan hojjetanii nu fayyadan barbaanna."jedhan..
"Kana jechuun,biyya guddataa jirtu jechuu irraa gara biyya hojiin karaa saayinsaawaa ta'een itti hojjetamuutti deemuu ni dandeenya jechuudha."
Chaarlas mana saayinsiin hoogganamu keessatti guddate.Abbaan isaa,kan waggoota muraasa dura du'aan boqate,mana barumsaa tokko keessatti saayinsii barsiisaa ture.
"Abbaan keenya,beekumsa gosa kamiiyyuu taanaan akka nu carraa argameen fudhannu barbaadaa ture. Keessattuu,kanneen saayinsiin hidhata qaban akka beeknu nurraa barbaadaa ture."
Garuu,Chaarlas yeroo mana barumsaa turetti intarneetii yookaan meeshaalee saayinsii fi teelnoolojii carra argachuu hin qabu ture. "Wantoonni rakkoo turan meeshaaleema ani harkaa qabu turan." jedhe, daa'imman harraa rakkoon suni akka isaan hin muudanneef haala jijjiiruu akka barbaadus ibsuudhaan.
Goodayyaa suuraa Gatiin kiitii saayinsii doolara Ameerikaa kudha-shan qofa
"Dhaloota dhufu kan abbaan koo na ga'oomse caalaa humneessuun yookiin ga'oomsuun akka waan hojii koo dirqamaa tayetu natti dhagayama.Haala sanaan rakkoowwan gurguddoo dhufan qolachuu ni dandayu jechuudha."
Kallattii kaba lixaatti fageenya sa'aatii jahaa Bereekuusoo irraa fagaattee magaalaa Kumaasii tan teeknoolojiin beekamtu keessatti woorkishooppii xinnoo keessatti gareen Chaarlas olkaayata meeshaa saayinsii walitti qindeessuudhaan hojiin kalaqaa hojjechguun qabamaniiru.
Jechoota sadiin qofa tajaajila manaan gahuu
Kondaaktaroota kumaatamaan laakkayaman rezistaroota xixiqqoo irratti baqsuun walitti suphaa jiru.
"Tole,egaa kunooti." jedhe Chaarlas sanduuqa gurraattii xinnoo olqabee boonaan.Akkaataa itti banamuu fi cufamu ilaalchisee, meeshaalee elektiroonikii ittiin hojjetame,sibiilota sirna elektiroomaagneetizimiitiif oolanii,sanduuqa ifaa, daawwitiiwwan fi gara walakkaatti ammoo baatriiwwaan kanneen hundaaf anniisa kennan mul'isa.
Chaarlas qaamolee maamila ta'uufii malan bilbilaan haasawanii wal beellamatanii jiru. Isaanis olkaayata meeshaa saayinsii gara biyya ollaa Gaanaa oomisha kookowaatiin beekamtu biyyi Aayvoorii Koostis gara manneen barnoota isaanii akka galu kanneen fedhii qabaniidha.
Ogeessa gurgurtaa gaariidha. Gaaffii gaafatame akkaataa salphaan deebisa. Bilbilaan haasawee yeroo xumuru fuulli isaa gammachuun ifa. "Haala gaariin raawwatame" jechuun ibsa yoo namoonni olkaayata meeshaalee saayinsii muraasa yaaliidhaaf bitachuuf gaafatanii waliigalan. "Suni ammoo baay'ee bitachuuf akka ajajan isaan taasisa yookiin olkaayata meeshaa saayinsii irratti akka qabeenya akka dhangalaasan sababa ta'a."jedhe.
Bereekuusoo daandii dhukkeen guutame irra kiilimeetira muraasa mana barumsichaa irraa fagaatee bakka jiru tokkotti Piriinsas Maakaafuyii fi hiriyyoonni ishii taa'anii hojii manaa isaanii hojjetu.
Goodayyaa suuraa Piriinsas Maakaafuuyii fi hiriyyoonni ishii kiitii saayinsii fayyadamuun dorgommii moo'atanii jiru
Maatiin ishii mana ijaarsi isaallee hin xumuramin tokko keessatti dayeeffatanii jiraatu. Ifaa yookaan elektirikii dhiisaatii manichi keenyaa yookiin gidaara manaatuu isa sirrii hin qabu.Aduun dhiitee galgaloofnaan,ifaa ofii isaaniitii kalaqan minjaala tokkorra walakkaa manaa kaayanii hojii isaanii hojjetan.
Piriinsas boonaan afaan guuttattee,"Kuni kuubii ifaati."jettee dubbatti. "Kana jechuun nuti hunduu fuula kuubii gama keenya aaneen ifaa argachuu hoji-manee keenya hojechuu ni dandeenna jechuudha.Piriinsasii fi gareen ishii ijoollee shamarranii kudha-lama qabu kalaqa isaaniitiin dorgommii saayinsii sadarkaa naannoo moo'ataniiru. Olkaayata meeshaa saayinsii fayyadamuudhaan kalaqan.
" Olkaayatni meeshaalee saayinsii otoo hin dhufin dura,kutaaleen saayinsii keenya baayyee nuffisiisoo turan. Saayinsii hubachuu hin dandeenyu ture. Sababni ammoo barumsicha yaad-hiddama(tiyoorii) qofaan barachaa waan turreefi."jette Piriinsas.
Chaarlasiif, yaanni dhaloota kalaqtootaa haaraa uumuu wanta ijoo inni qalbii isaa irra kaayee abdateedha.
Motarri Rudoolf Diizil attamiin addunyaa geeddare?
"Yeroo barattoonni olkaayata saayinsii isaanii fayyadamanii waa kalaqan arguun dhugumaan qabxii nuti mirkaneeffachuuf yaalaa turreedha.
"Barattoonni akka meeshaalee argatan taasifnaan,beekumsa fayyadamanii rakkoowwan naannawa isaanii jiraniif fala barbaaduu ni eegalu."
Kalaqaa kalaqtoota uumaa jiruu? "Waan gaarii fakkaata, " jedhe,fuuli isaa gammachuun ifee. "Abbaan koo otoo silaa as jiraatee, hojii kiyyaan akka boonu shakkii hin qabu. "
Viidiyoo Dahee guyyaa 6ffaatti mucaa koo baadhee hojii listiroo eegale
Jijjiirraa kaabinootaafi dhiibbaa siyaasaa
'Burushii fakkii ittiin kaasu dhabee eegee fardaa mureen eegale'
'Kampaanonni Itoophiyaa keessa jiran hojjettootasaanii miidhaa jiru'
Hanqinni qoricha daranyoo sombaa Oromiyaatti yaaddoo uume
Raashiyaan Roobootiidhaan TV irratti oduu dhiyeessuu eegalte
Maaliitti sababa jeequmsaan mootummaan aangoo gadhiise
Barattoonni m/barumsaa Waaqoo Guutuu 'haala gaariirra jiru'
Muudama Obbo Lammaa Magarsaa namoonni akkamiin ilaalu?
Dubartiin qoccollaa saalaa irra gahe waan himatteef ibiddaan ajjeefamte